Uluhlu kunye nemihla yeefowuni zakwaSony eziza kukonwabela iPie ye-Android 9.0 | I-Androidsis
Oko kwafika ngokusesikweni I-Android 9.0 Pie, Abavelisi abaliqela abahambahambayo batyhile ukuba zeziphi izixhobo zabo ezizakonwabela inkqubo entsha kaGoogle. AbakwaSony, ngokwenxalenye yabo, sele besinike amagama kwaye baya kuqala nini ukuhlaziya.
Nangona kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo inkampani yaseJapan ibisibonisile zeziphi iimofiles eziya kufumana le nguqulo ye-OS, ngoku Sele siyazi imihla ecwangcisiweyo kunye nezinye iimodeli ezijoyine uloliwe.
Kolu luhlu lincinci lulandelayo sikubonisa lona ngezantsi, sinokukuqaphela oko umenzi uthambekele ekuboneleleni ngolu hlobo lwe-Android kwii-terminals zayo zeXperia XZ, Ezona fowuni zomfuziselo zenkampani namhlanje, kunye ne-Xperia yoluhlu lwe-XA, ke akuqinisekanga ukuba ezinye iimodeli zezinye iintsapho, ezinje Xperia L2Nceda uphucule ukuya kwi-9.0 yeenyawo kwixa elizayo.
1 Isiphelo esiphakamileyo sikaSony esiya kuhlaziya kwiPie ye-Android 9.0 kulo nyaka
2 Uluhlu oluphakathi lukaSony oluya kuhlaziya kwi-Android 9.0 Pie kunyaka olandelayo
Isiphelo esiphakamileyo sikaSony esiya kuhlaziya kwiPie ye-Android 9.0 kulo nyaka
I-Sony Xperia XZ2 Compact
I-Sony Xperia XZ2 iNkulumbuso
I-Sony Xperia XZ1 Compact
Ezi modeli zazivele zatyhilwa ngaphambili, nangona kungenjalo ngokuthe ngqo, yeyiphi Izakuba phakathi ku-Novemba olandelayo.
Uluhlu oluphakathi lukaSony oluya kuhlaziya kwi-Android 9.0 Pie kunyaka olandelayo
I-Sony Xperia XA2 Plus
Uhlaziyo olutsha kuluhlu olukhutshwe kunye nokubhengezwa kwemihla, ityhile ezi fowuni, ke Ngokuqinisekileyo ukuba Bayakonwabela zonke izibonelelo zomphumelele kwi-Android Oreo. Nangona kunjalo, ayizukuqala ekuqaleni konyaka olandelayo ukuba baqale ukuyifumana, nangona ingaziwa ncam ukuba nini, njengoko inkampani esekwe eJapan ingakhange iveze inyanga, okanye iinyanga ezifanelekileyo, apho ezi phakathi kweendawo iya kuhlaziywa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » USony utyhila imihla eziza kufumana ngayo iifowuni ze-Android 9.0
Ezona zixhobo zibalaseleyo ze-Android zeemvumi